Nrọ Josef (1-11)
Josef na ụmụnne ya ndị na-enwere ya anyaụfụ (12-24)
E rere Josef, ya abụrụzie ohu (25-36)
37 Jekọb bi n’ala Kenan, ala ebe nna ya bụbu onye mbịarambịa.+ 2 Ihe a bụ akụkọ ndụ Jekọb. Mgbe Josef+ dị afọ iri na asaa, o so ụmụ Bilha+ na ụmụ Zilpa,+ ndị nwunye nna ya, na-elekọta atụrụ.+ N’otu oge, Josef kọọrọ nna ha ihe ọjọọ ha mere. 3 Izrel hụrụ Josef n’anya karịa ụmụ ya niile ndị ọzọ+ n’ihi na ọ bụ nwa ọ mụrụ n’agadi. Ọ kwakwaara ya uwe pụrụ iche.* 4 Mgbe ụmụnne ya hụrụ na nna ha hụrụ ya n’anya karịa ụmụnne ya niile, ha malitere ịkpọ ya asị, ha anaghịkwa eji obiọma agwa ya okwu. 5 Mgbe e mechara, Josef rọrọ nrọ ma kọọrọ ya ụmụnne ya.+ Ha wee hụkwuo ihe mere ha ga-eji kpọọ ya asị. 6 Ọ sịrị ha: “Biko, nụrụnụ nrọ a m rọrọ. 7 Anyị nọ n’etiti ubi na-eke ọka* n’ùkwù n’ùkwù. Ùkwù ọka nke m wee bilie guzo ọtọ, ùkwù ọka nke unu agbaa ùkwù ọka nke m gburugburu kpọọrọ ya isiala.”+ 8 Ụmụnne ya sịrị ya: “Ị̀ na-ekwu na ị ga-eme onwe gị eze ma chịwa anyị?”+ Ha wee hụ ihe ọzọ mere ha ga-eji kpọọ ya asị maka nrọ ọ rọrọ nakwa ihe o kwuru. 9 Mgbe e mechara, ọ rọrọ nrọ ọzọ ma kọọrọ ya ụmụnne ya, sị: “Arọrọ m nrọ ọzọ. Ná nrọ a, anyanwụ na ọnwa na kpakpando iri na otu nọ na-akpọrọ m isiala.”+ 10 O wee kọọrọ nna ya nrọ a, kọọkwara ya ụmụnne ya. Nna ya baara ya mba, sị ya: “Gịnị ka nrọ a ị rọrọ pụtara? Ị̀ na-ekwu na mụ na nne gị na ụmụnne gị ga-abịa kpọọrọ gị isiala?” 11 Ụmụnne ya wee nwewere ya anyaụfụ,+ ma nna ya buuru ihe ahụ o kwuru n’obi. 12 Ụmụnne ya du ìgwè anụ nna ha gaa n’ebe ha ga-ata ahịhịa n’ebe dị nso na Shikem.+ 13 Mgbe e mechara, Izrel gwara Josef, sị: “Ọ̀ kwa ụmụnne gị nọ n’ebe dị nso na Shikem na-elekọta ìgwè anụ? Bịa ka m ziga gị ka ị gakwuru ha.” Josef sịrị ya: “Ejikerela m.” 14 Nna ya sịrị ya: “Biko, gaa mata ma ahụ́ ọ̀ dịkwa ụmụnne gị. Chọpụta otú ìgwè anụ ndị ahụ mere, gị abịa kọọrọ m.” O wee si na ndagwurugwu Hebrọn zipụ ya,+ ya agawa n’ụzọ e si aga Shikem. 15 Mgbe e mechara, otu nwoke hụrụ ya ka ọ na-akpagharị n’ọhịa. Nwoke ahụ jụrụ ya, sị: “Gịnị ka ị na-achọ?” 16 O wee sị ya: “M na-achọ ụmụnne m. Biko, gwa m, olee ebe ha nọ na-elekọta ìgwè anụ?” 17 Nwoke ahụ sịrị ya: “Ha esila ebe a pụọ, n’ihi na anụrụ m ka ha na-ekwu, sị, ‘Ka anyị gaanụ Dotan.’” Josef wee chọrọ ụmụnne ya gawa ma hụ ha na Dotan. 18 Ha hụrụ ya ka ọ nọ n’ebe dị anya. Tupu ya erute n’ebe ha nọ, ha malitere ịkpa nkata ka ha gbuo ya. 19 Ha wee gwa ibe ha, sị: “Lee, ọrọ nrọ abịawala.+ 20 Bịanụ ka anyị gbuo ya ma tụba ya n’otu n’ime olulu* ndị dị n’ebe a. Anyị ga-asịzi na ajọ anụ ọhịa adọgbuola ya. Ka anyị hụzie otú nrọ ya ga-esi mezuo.” 21 Mgbe Ruben+ nụrụ ihe a, ọ gbara mbọ ka ọ napụta ya n’aka ha. Ọ sịrị ha: “Ka anyị ghara igbu ya.”+ 22 Ruben sịziri ha: “Unu egbula mmadụ.*+ Tụbanụ ya n’olulu a dị n’ala ịkpa. Unu emerụla ya ahụ́.”+ O bu n’obi ịnapụta ya n’aka ha ka ọ kpọghachiri ya nna ya. 23 Ozugbo Josef bịakwutere ụmụnne ya, ha yipụrụ Josef uwe ya, ya bụ, uwe pụrụ iche o yi.+ 24 Ha kpọọrọ ya tụba n’olulu ahụ. N’oge ahụ, mmiri adịghị n’olulu ahụ. 25 Ha wee nọdụ ala ka ha rie nri. Mgbe ha lepụrụ anya, ha hụrụ ìgwè ndị Ishmel+ ka ha si Gilied na-abịa. Kamel ha bu mmanụ labdanọm, mmanụ balsam, na azụ osisi.*+ Ha na-aga Ijipt. 26 Juda wee sị ụmụnne ya: “Olee uru ọ ga-abara anyị ma anyị gbuo nwanne anyị ma kpuchie ọbara ya?+ 27 Bịanụ ka anyị resị ya+ ndị Ishmel, ka aka anyị ghara imetụ ya. A sị ka e kwuwe, ọ bụ nwanne anyị. Anyị na ya bụ otu ahụ́.” Ha wee gee nwanne ha ntị. 28 Mgbe ndị Ishmel, ya bụ, ndị Midian+ ndị na-azụ ahịa, na-agafe, ha dọpụtara Josef n’olulu ahụ ma resị ya ndị Ishmel. Ha rere ya mkpụrụ ego ọlaọcha iri abụọ.+ Ndị ahụ kpọọrọ Josef banye n’Ijipt. 29 Mgbe e mechara, Ruben gaghachiri n’olulu ahụ ma hụ na Josef anọghị n’olulu ahụ, ya adọwaa uwe ya. 30 Mgbe ọ gaghachiri n’ebe ụmụnne ya nọ, o tiri mkpu, sị: “Nwatakịrị ahụ anọghịzi n’ebe ahụ! Gịnị ka m ga-eme?” 31 N’ihi ya, ha chịịrị uwe Josef, gbuo otu mkpi, bịanye uwe ahụ n’ọbara mkpi ahụ. 32 Mgbe e mechara, ha chịgaara nna ha uwe ahụ pụrụ iche, wee sị ya: “Lee ihe anyị hụrụ. Biko, leruo ya anya ka ị mara ma ọ̀ bụ uwe nwa gị ka ọ̀ bụ na ọ bụghị ya.”+ 33 O wee leruo ya anya ma tie mkpu, sị: “Ọ bụ uwe nwa m! Ọ ga-abụ na ajọ anụ ọhịa atagbuola Josef! Ọ ga-abụ na anụ ọhịa adọriela ya!” 34 Jekọb wee dọwaa uwe ya, kee ákwà iru uju n’úkwù ya ma ruoro nwa ya uju ọtụtụ ụbọchị. 35 Ụmụ ya ndị nwoke niile na ụmụ ya ndị nwaanyị niile nọ na-akasi ya obi, ma o kweghị ka a kasie ya obi. Ọ nọ na-asị: “M ga na-eruru nwa m uju ruo n’ili.”*+ Nna ya wee na-ebere ya ákwá. 36 Mgbe ndị Midian ruru Ijipt, ha resịrị Pọtịfa Josef. Pọtịfa na-eje ozi n’obí Fero,+ ọ bụkwa onyeisi ndị nche Fero.+
^ Ma ọ bụ “uwe mwụda mara mma.”
^ Ọ ga-abụ na e gwuru olulu ndị a ka mmiri na-asọba na ha.
^ Na Hibru, “awụfula ọbara.”
^ Ma ọ bụ “ụgbụgbọ osisi.” A na-eji eso si n’azụ osisi a eme ihe na-esi ísì ọma.